UKumkanikazi weBeyHive: UBeyonce wavula iBhlog - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa UKumkanikazi weBeyHive: UBeyonce wavula iBhlog
Ibhlog yeBeyHive , ukongeza kwi-tech ye-superstar's takeover, kunye negama lakhe iwebhusayithi , I-Tumblr yakhe ecekeceke kwaye ngamanye amaxesha umlomo wakhe ukhululekile kwezopolitiko I-Instagram .
Entsha kwisandi sakhe sokucula, er, kuthiwa imilebe , Ukunikezelwa kwe-Star Spangled Banner ngexesha lokumiselwa kuka-Mongameli wangoMvulo, uSasha-Fierce-ified GQ Isembozo sikaFebruwari kunye nokusebenza kwakhe okuzayo kwiSuper Bowl XLVII yehafu yexesha, uMfazi wesibini uthathe umoya wedijithali ukuze abelane ngento ekhethekileyo nabalandeli bakhe: umbono wedijithali weveki nganye engqondweni kaBey.
Kwileta ebhalwe kuye iwebhusayithi namhlanje, uBeyonce ubhale:
Ibhlog yeBeyHive yindlela yam yokubonisa zonke izinto ezikhuthazayo endifumana kuzo yonke imihla. Oku ngamehlo am. Ubuye abhale ukuba uyakubonisa ubugcisa be fan kublogi:
Uninzi lwenu lwenza iividiyo, ukupeyinta-ndifuna ukubonisa umhlaba okwenzayo nendlela endikuxabisa ngayo.
Ngaba ngaphakathi kwe-noggin yakhe enxibe ngokugqibeleleyo kule veki? Itayitile kaRebecca Solnit, bhanya-bhanya ka-Oscar Argo kwaye Amarhamncwa asendle aMazantsi , UChristopher Marley u-beetle-mosaic art, i-psychedelic pop duo, imizobo ka-Oliver Clegg…
O, kunye nezihlangu.
Ibhlog ifuna ukuseta iakhawunti yasimahla, apho abalandeli banokufikelela ngokupheleleyo kwi-Bey-spiring: ukukhetha kwakhe abantu abakhuthazayo, isitrato esitrato kwaye mhlawumbi, mhlawumbi loo macaroni-bedazzled-portrait obusoloko ufuna ukumthumela.
Ibhlog kaBey ifika emva kweGoop (ngu I-pal ebomvu ethile Ukuthanda ukubiza abantwana bakhe emva kweetopi zebhayibhile) kwaye ubonakalisa uhlobo olufanayo olucwebezelayo, olugqwesileyo lwewebhusayithi ethile yokuphila nguMnu Beyonce Knowles (aka Jay-Z).
Ayisiyiyo yokuba silindele nantoni na engaphantsi kwi-Bey enezinto ezininzi, ekuphela kwento esezantsi ngumhla wokukhutshwa ngeveki.
Yintoni. Siza kulinda ngomoya ophefumlelweyo.
U-Bill no-Melinda Gates Uqhawulo mtshato: Baza kwahlula njani i-146 yezigidi zezigidi zeerandi zabo?
Sukuba nexhala, Izitayile zikaHarry zilapha ukusisindisa sonke
Iinkwenkwezi zeMovie zifile kwaye aziphindi zibuye
Maurice ubuhle kunye nerhamncwa 2017
Owona mbuzo ungcono ukubuza igqirha
buyisela indawo yokukhangela indawo yasimahla
ngaphezulu kweendlela ezizezinye ze-adderall
kusemthethweni ukulima amakhowa